Beauty News – YaMeiShih
Home - Beauty News
ထုံဆေးမလို သွေးထွက်ခြင်းမရှိနာကျင်ခြင်းမရှိ တဲ့ မျက်ခုံးဆွဲသားခြင်း နည်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သဘာဝကြပြီးနူးညံသောမျက်ခုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ရန်…မျက်ခုံးထိပ်အရောင်သည်အဓိကအရေးပါပါသည်။ မျက်ခုံးထိပ်သည်အရောင်ဖျော့နေမည်ဆိုပါကသဘာဝကျသောမျက်ခုံးကိုရရှိစေပါသည်။မျက်ခုံး၏အရောင်သည်တပြေးညီဖြစ်နေမည်ဆိုလျှင်လှပသောပုံစံမရပဲမျက်ခုံးပုံစံကိုပျက်ဆီးစေပါသည်။မျက်ခုံး၏ထိပ်ပိုင်းရှိအရောင်သည်နုနေရပါမည်ဖျောနေ့ရပါမည်။သို့မှသာသဘာဝကျသောမျက်ခုံးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်ခုံးထိပ်ရှိအရောင်သည်ရင့်နေမည်ဆိုပါကသဘာဝမကျခေတ်မမှီသော မျက်ခုံးပုံစံဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။နူးညံ့မှုမရှိသကဲ့သိုဖြစ်နေတတ်ပါသည် ကံပွင့်ပြီး လာဘ်လာဘကောင်းစေသောမျက်ခုံးထိုးခြင်း၊ မျက်ရစ်ဖော်ခြင်း (အပေါ်အောက်) နှုတ်ခမ်းဆေးသွင်းခြင်းများကို သွေးထွက်ခြင်း၊ရောင်ရမ်းမှု မရှိခြင်း၊ နာကျင်မှုမရှိ ကြောင်း အာမခံခြင်း၊ အသုံးပြုသောဆေးများမှာ သဘာဝဆေးများဖြစ်ပါတယ်။ Eye liner ဆွဲသားရင်မညီမညာနဲ့ဖြစ်နေလို့စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေသူများ အတွက် တရေးနိုးထကြည့်ရင်တောင် လှပသေသပ်တဲ့ မျက်လုံးတစုံကိုပိုင်ဆိုင်ချင်နေပြီဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့ YaMeiShih Skin Specialist Clinic & Laser Beauty Center ကနေပြီးတော့ အတွေ့အကြုံရှိ...
當代線雕，極致美顏，液態拉皮，讓您年輕20歲，美國FDA通過之薇拉倒鉤線，引爆話題 အမေရိကန် FDA ခွင့်ပြုချက် အသိအမှတ် V- Loc Lifting အသါးကျစ်လစ်မှု အကောင်းဆုံး တင်းရင်းမှုအကောင်းဆုံး ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် Thread lift 360 ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် လက်ရှိအသက်(20)ထက်အရွယ်တင် နုပျို အရွယ်တင် တင်းရင်းမှုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီရှင် အမြန်ဆုံးရွေးချယ်လိုက်ပါရှင့် -Address : No. 57 A, Thar Yar Shwe Pyi St, Yankin Tsp, Yangon. လိပ်စာ...
ဒီသင်တန်းလေးကတော့ မိမိရဲ့ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းပြုဖိုပဲ တက်တက်အပျော်တမ်း မိမိဘာသာ အလှအပကို ချစ်မြတ်နိုးလို့ပဲ တက်တက် ယခုသင်တန်းကို တက်ရောက်ခြင်း အားဖြင့် permanent Makeup အားကျွမ်းကျင်စွာ ပြုလုပ်တတ်သည့်အပြင် မိမိ၏ social network ကျယ်ပြန့်လာခြင်း ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်း အသစ်များနှင့် ဆုံစည်းနိုင်ခြင်း အလှအပဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကိုပါ ရရှိနိုင်မှ ာဖြစ်ပါတယ် ရှင်။ ယခုဖွင့်လှစ်မယ် permanent Makeup သင်တန်းလေးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့...